အပျော်လွန် မူးရူးပြီးပွဲလာကြသူတွေထက် အလှပဆုံးနေ့ကို ပုံဖော်ခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ် - JAPO Japanese News
လာ 20 Jan 2020, 10:11 မနက်
အသက် ၂၀ ပြည့်သွားတဲ့ လူငယ်တွေကို ဘ၀တစ်ဆစ်ချိုးနေရာ ရောက်သွားပြီလို့ သတ်မှတ်ပြီး၊ အရက်ရော ဆေးလိပ်ရော တရား၀င်သောက်ခွင့် ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသက် ၂၀ ကျော်သွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ပြစ်မှုကျူးလွန်မိသွားရင်တော့ သူ့နာမည်အောက်မှာ ပြစ်မှုနဲ့မကင်းရှင်းသူ ဆိုပြီး အမည်းစက်လို အမြဲကပ်ပါနေတော့မှာပါ။
နောက်ပြီး လွတ်လပ်တဲ့ဘ၀ကနေ အရာရာကို တာ၀န်ယူနိုင်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး သတ်မှတ်ကြတယ်တဲ့..။
ဒီလိုဘ၀တစ်ဆစ်ချိုးလို့ သတ်မှတ်တဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေက အသက် ၂၀ ပြည့်မယ့်လူငယ်တွေအတွက် ဂုဏ်ပြုပွဲတွေကို နှစ်တိုင်း January ၁လပိုင်း ဒုတိယအပတ် တနင်္လာနေ့မှာ ကျင်းပကြပါတယ်။ မြို့နယ်အလိုက် ကျင်းပပုံချင်းကတော့ မတူကြပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ၀တ်ကောင်းစားလှတွေ၀တ်ပြီး ပွဲတက်လာသူတွေရှိသလို အရက်မူးရူးပြီး အော်ကြီးဟစ်ကျယ် အုပ်စုလိုက် လာကြတဲ့အတွက် ပွဲဟာရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဖြစ်သွားရတဲ့ အခြေအနေတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီအထဲမှာမှ ရှေးအစဥ်အလာကို ပြန်အသက်သွင်းခဲ့ကြသူတွေကတော့ 國學院大學（こくがくいん　だいがく）Kokugakuinn ဆိုတဲ့ တက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်ကနေစပြီး 成人加冠式（せいじんかかんしき）Seijinnkakan Shiki ပွဲကို ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၁၀၀၀ မတိုင်ခင် ကျင်းပခဲ့ကြတဲ့ပွဲအတိုင်း ယနေ့ခေတ်မှာ အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်က ပြန်အသက်သွင်းပြီး ကျင်းပနေကြတဲ့ပုံပါ။
အဲ့ဒီပွဲမှာ အမျိုးသားတွေဆိုရင်တော့ ဂုဏ်ပြုဦးထုပ်ဆောင်းခွင့်ရပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေကတော့ 釵子（さいし）Saishi လို့ခေါ်တဲ့ ရှေးဂျပန်အမျိုးသမီးတွေ ဆံထုံးထုံးပြီး ဆံထုံးရဲ့အပေါ် အလယ်ခေါင်တည့်တည့်မှာ တန်ဆာဆင်ရတဲ့ အရာလေးကို ပေးအပ်ချီးမြင့်ခြင်း ခံရတာပါ..။
အရင်အချိန် ရှေးဂျပန်အမျိုးသမီးတွေ ၀တ်ဆင်တဲ့အ၀တ်အစားကိုလည်း အဲ့တော့မှ စပြီး၀တ်ဆင်ခွင့်ရပါတယ်။ အဲ့ပွဲမှာ၀တ်ရတဲ့ အ၀တ်အစားဟာ ကီမိုနိုလို့ ထင်မိတဲ့သူရှိလား..? တကယ်က ကီမိုနိုမဟုတ်ပါဘူး!!!
振袖 Furisode ပါတဲ့….!! ကွာခြားမှုကတော့ လက်အရှည်မတူပါဘူး။ နောက်ပြီး အရောင်အသွေးစုံ အဆင့်အတန်းမြင့်လို့ စျေးအရမ်းကြီးပါတယ်တဲ့….။
ပိုက်ဆံတတ်နိုင်သူတွေ တစ်ချို့ကတော့ ၀ယ်၀တ်တယ်။ ငှားပေးတဲ့နေရာတွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်တဲ့….။
အသက် ၂၀ ပြည့်ပြီးတဲ့ အချိန်ကနေစပြီး အရွယ်ရောက်သူတို့ရဲ့ ဂုဏ်ပြုအခမ်းအနား၊ မင်္ဂလာ အခမ်းအနားနဲ့ တခြား ကြီးကျယ်တဲ့အခမ်းအနားပွဲနေ့မှ ၀တ်ဆင်ရတာပါ…။ ပြီးရင်တော့ မိဘတွေနဲ့ အားလုံးရဲ့ အရှေ့မှာ မိမိဟာ ခန့်ညားတဲ့လူတစ်ယောက် ဖြစ်လာပြီဆိုတာကို ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ပြသကြပါတယ်။
လှပတဲ့ ရှေးရိုးရာအကတွေကိုလည်း တင်ဆက်ပြသပါတယ်။
အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မှာတော့ ပွဲတက်မယ့်လူငယ်တွေကို မင်းမျိုးမင်းနွယ်အ၀တ်အစား ၀တ်ဆင်စေတာပါ။
ဂျပန်လူမျိုးတွေတော်တော်များများ မကြိုက်ကြတဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ဂျပန်ရဲ့ ယဥ်ကျေးမှုကို ချိုးဖောက်ပြီး ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် သောင်းကျန်းနေတဲ့ လူငယ်တစ်စုပါပဲ။
အဲ့ဒီလို စိတ်ကြိုက်သောင်းကျန်းနေကြတဲ့ လူငယ်တစ်စုကို 國學院大學（こくがくいん　だいがく）တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပတဲ့ပွဲကို ခံယူကြသူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဥ်ကြည့်မယ်ဆို
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဒီလိုမျိုးအစဥ်အလာကို အမြတ်တနိုးပြန်ထိန်းသိမ်းကြရင် ကောင်းမှာပဲလို့လည်းတွေးမိပါတယ်၊ စာဖတ်သူတို့ရော ဘယ်လိုထင်ကြလဲ….?